Bit By Bit - Kubvunza mibvunzo - 3.5.3 Gamification
Standard kuongorora zviri Kuchifinha kuvatori vechikamu, asi anogona uye anofanira kuchinja.
Saka kure, ndafanokuudzai pamusoro nzira itsva achibvunza kuti zviri akwanise kubudikidza kombiyuta-raitongwa kubvunzurudza. Zvisinei, mumwe Zvakashatira kombiyuta-raitongwa kubvunzurudza ndechokuti hapana kubvunzurudza munhu kubatsira kunyengedza kutaurawo. Iri idambudziko nokuti kuongorora zvose nguva yakawanda uye anofinha. Saka, munguva yemberi, ongororo vagadziri vari kuenda kuti kugadzira kumativi vechikamu dzavo uye kuti muitiro mibvunzo kunakidza uye mutambo-kufanana. Izvi unowanzonzi gamification.
Kuenzanisira kuti kunonakidza kuongorora vangatarira akafanana, ngatikurukurei Friendsense, pakubvunzurudza kwakaitwa mumapepa sezvo mutambo on Facebook. Sharad Goel, Winter Mason, uye Duncan Watts (2010) vaida kufungidzira sei vanhu zvikuru vanofunga vakafanana shamwari dzavo uye zvikuru sei vari chaizvoizvo seshamwari dzavo. mubvunzo uyu pamusoro chaiye uye vachinzwisisa mafungiro zvakafanana anowana zvakananga pane vanhu kukwanisa zvakarurama kuziva kwavo mumagariro zvakatipoteredza uye zvine cho- enyika polarization uye simba pamusoro zvemagariro. Pachena nezverairo, chaiyo uye vachinzwisisa mafungiro zvakafanana chiri nyore chinhu kuyera. Vaongorori angadai achangobva akabvunza mijenya vanhu vanenge kumafungiro avo uye akazokumbira shamwari dzavo pamusoro kumafungiro avo (ichi rinobvumira nokuyerwa chaihwo mafungiro chibvumirano) uye vangadai vakabvunza mijenya vanhu zvokufungidzira shamwari dzavo 'mafungiro (ichi rinobvumira nokuyerwa vakanzwisisa mafungiro chibvumirano). Zvinosuruvarisa zviri logistically zvakaoma chaizvo kuti kubvunzurudza zvese respondent uye shamwari yake. Naizvozvo, Goel uye nevamwe vakatendeuka ongororo yavo ive Facebook App yakanga kunonakidza kuridza.
Pashure ubatanidzwe akabvuma kuva ongororo, iyo Anwendung akasarudza shamwari kubva Facebook nhoroondo respondent uye akabvunza mubvunzo nezvemaonero shamwari kuti (Figure 3.9). Intermixed nemibvunzo nezveshamwari randomly vakasarudzwa, vanhu respondent uyewo akapindura mibvunzo pamusoro make. Pashure pokupindura mubvunzo pamusoro neshamwari respondent akaudzwa kuti mhinduro yake zvakanga zvakarurama kana, kana shamwari yake asina akapindura, iyo respondent akakwanisa kukurudzira shamwari yake kuzopindura. Saka, kuongorora panyenga chikamu kuburikidza kutapukirwa muchiuto.
Figure 3.9: inowanikwa kubva Friendsense kudzidza (Goel, Mason, and Watts 2010) . Vaongorori vakafuratira mwero mafungiro ongororo mugomba kunonakidza, gamelike ruzivo. The Anwendung akabvunza vechikamu vaviri mibvunzo inokosha zvikuru akasununguka mibvunzo, wakadai souya kuratidzwa nomufananidzo uyu. Image rinoshandiswa mvumo kubva Sharad Goel.
Mibvunzo mafungiro akanga chakatorwa kubva General Social Survey. Somuenzaniso, "Ko [shamwari yako] kunzwira tsitsi vokuIsrael kupfuura namaParistina kuMiddle East ezvinhu?" Uye "Kuriita [shamwari yako] mitero yakakwirira kuti hurumende kupa nokudenga kutarisirwa utano?" Pamusoro mibvunzo iyi inokosha , vaongorori kusanganiswa mibvunzo yakawanda akasununguka: "here [shamwari yako] pane kunwa waini pamusoro nedoro" uye "? Kuriita [shamwari yako] nani kuva simba kuverenga mupfungwa, panzvimbo simba kubhururuka" mibvunzo iyi akasununguka akaita bumbiro kunakidza kune vechikamu uye kwakaita inonakidza kuenzanisa: dai mafungiro chibvumirano zvakafanana nokuti zvakakomba enyika mibvunzo sezvo mibvunzo akasununguka nemanwiro uye dzine?
Paiva huru zvawanikwa matatu kubva pakudzidza. Chokutanga, shamwari dzaiva kazhinji kupa mhinduro chete pane vatorwa, asi kunyange shamwari dzepedyo vachiri hadzibvumirani vanenge 30% mibvunzo. Chechipiri, vakabvunzwa pamusoro-kufungidzira chibvumirano kwavo neshamwari dzavo. Nemamwe mashoko, vakawanda kusiyana nepfungwa ariko pakati shamwari haina kumbozviona. Pekupedzisira, vatori vechikamu vakanga sezvo zvichida kuziva nokusawirirana neshamwari dzavo pane nyaya dzezvematongerwo enyika pane akasununguka nyaya nemanwiro uye dzine.
Kunyange zvazvo Anwendung havachakwanisi kutamba (zvinosuruvarisa), yaiva muenzaniso wakanaka sei vatsvakurudzi anogona mwero mafungiro ongororo kupinda chinhu kunakidze. More kazhinji, vamwe okugadzira zvinhu uye magadzirirwo basa, zvinokwanisika kuvandudza inodzidzisa ruzivo kuti ongororo vechikamu. Saka, nguva inotevera uri afunge imwe ongororo yakaitwa, tora kanguva kufunga zvaungaite kuti ruzivo nani zvenyu vechikamu. Vamwe vangatya kuti matanho aya akatarira gamification aigona kurwadzisa date quality, asi ndinofunga kuti kufinhikana vatori vari pangozi zvikuru nemashoko unhu.
Basa Goel uye nevamwe inojekesawo dingindira chinotevera: unobatanidza kuongorora zvimwe zvinyorwa date. Kana ichi kuburikidza dzaibatanidza kuongorora pamwe Facebook vaongorori rwoga vaikwanisa kuwana mazita shamwari vechikamu. In chinotevera, tichakurukura linkages pakati kuongorora uye kumwewo mashoko kuchakurukurwa zvakadzama.